မင်းမော်, တက္ကသိုလ်. တက္ကသိုလ် မင်းမော်ကို ရန်ကုန်တိုင်း၊ တွ
ⓘ မင်းမော်, တက္ကသိုလ်. တက္ကသိုလ် မင်းမော်ကို ရန်ကုန်တိုင်း၊ တွံတေးမြို့တွင် အဖ ဦးတင်မောင်၊ အမိ ဒေါ်စိန်မြတို့မှ ၁၉၃၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၉ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ..